Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana WhatsApp maimaimpoana amin'ny fitaovana | Vaovao momba ny gadget
Whatsapp no ​​mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo malaza indrindra. Olona an-tapitrisany no mampiasa azy isan'andro amin'ny findainy, tablette ary solosaina.
Na dia misy ny solony toa an'i Telegram ary misy maro antony tsy hampiasa WhatsApp, ny marina dia ny fifandraisantsika rehetra no ampiasainy betsaka indrindra mandra-pahatongan'ny andro fifindra-monina goavambe amin'ny sehatra hafa, WhatsApp dia hanohy hanjakazaka amin'ny sehatry ny fandefasan-kafatra ary mandritra ny fotoana maharitra, miantso amin'ny alàlan'ny VoIP.
1 Sintomy ny WhatsApp
2 Ny tsy fahombiazana matetika ao amin'ny WhatsApp
Raha mbola manana fisalasalana ianao amin'ny fomba misintona whatsapp Ho an'ny iray amin'ireto fitaovana ireto, etsy ambany dia hasehonay anao ny fomba hanaovana izany amin'ny sehatra tsirairay.
Sintomy ny WhatsApp ho an'ny iPhone
Sintomy ny WhatsApp ho an'ny BlackBerry
Sintomy ny WhatsApp amin'ny PC
Sintomy maimaim-poana i Wasap
Isaky ny fampianarana ataonao dia ho hitanao ny antsipiriany momba izany mametraka WhatsApp amin'ny gadget marobe, na solosaina misy Windows na OS X, iPhone, iPad na finday na tablette misy Android voapetraka.
Ny tsy fahombiazana matetika ao amin'ny WhatsApp
Si Manome anao lesoka i Whatsapp, eto izahay dia mampianatra anao ny fomba fanamboarana ny lesoka mahazatra indrindra an'ny mpanjifa fandefasan-kafatra.
anefa tsy ara-dalàna matetika ny manana olana Rehefa mametraka ny rindranasa amin'ny fitaovantsika dia misy andiana toe-javatra na takiana izay raha tsy mankatò izahay dia afaka manome aretin'andoha hafa izy ireo.
Antenainay fa amin'ny rohy izay navelanay andalana vitsivitsy ho azonao hamaha ny olana amin'ny WhatsApp anao ary midira amin'ny fiarahamonina lehibe mampiasa azy isan'andro.